China Track Linear Actuator 12v 24v FD3 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Sanxing
မော်တော်ဆိုင်ကယ်တီဗီ Lift- 26 "...
DC မော်တာ Linear Actuator FD ...
Mini ကို Linear Actuator FD5
DC Linear Actuator လျှပ်စစ် ...
Linear Actuator 12v 24v FD3 ခြေရာခံ
FD3 Linear Actuator သည် Track Linear Actuator ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် track linear linear motion design ကိုအသုံးပြုသည်။ ထူးခြားသောတည်ဆောက်မှုသည်ပုံသေတပ်ဆင်ရန်အချက်များလိုအပ်သည့် application များအတွက်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ပရိဘောဂနှင့်အိမ်သုံးအလိုအလျောက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးဆိုဖာ၊ တီဗွီဓာတ်လှေကားများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
၃ ရက်အတွင်း ၇ ရက်အတွင်းအမြန်ပို့ခြင်း။
4. NO MOQ, 1 PC ကို OK ကို။
၅။ အာမခံကာလ ၁၂ လ။
၆။ OEM & ODM အမှာစာကိုလက်ခံပါ။
5000N (တွန်း) / 4000N (ဆွဲ)
min ။ တပ်ဆင်မည့်အကွာအဝေး (က)
၁၀%၊ ၂ မိနစ်ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် ၁၈ မိနစ်ခန့်ရပ်ပါ
-20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ + 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
၁။ မော်တာကိုပလပ်စတစ်အိမ်များဖြင့်ပတ်ထားသဖြင့်အပူပေးမှု၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်ဆူညံသံကိုကာကွယ်ပေးသည်။
2. နောက်ဘက် connector ကိုပလပ်စတစ်အိမ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
အဆိုပါ actuator အဖြူရောင်ပလပ်စတစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှတဆင့်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဤသည်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု POM ကိုဖန်ဆင်းသည်က max 5000N ဝန်ဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်, actuator ၏ခေါင်းပေါ်မှာသံအပိုင်းအစတပ်ဆင်ထားသည်။
FD3 actuator ကို TV lift အတွက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးသည် (TV mounting brackets - SXTL တီဗီဓာတ်လှေကား ), ကကက်ဘိနက်ထဲမှာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ကအိပ်ရာရဲ့အဆုံးမှာ install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ရုံးနှင့်အိမ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်။
အသုံးပြုသူများတွင်ကိုယ်ပိုင် brackets ရှိပါက FD3 actuator ကို LCD lift အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Sanxing ဝေးလံခေါင်ဖျားထိန်းချုပ်မှုတစ်ခု optional ကိုရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
၁၂ လအတွင်းမွေးဖွားသည့် နေ့မှစ၍ ပုံမှန်အခြေအနေတွင်အသုံးပြုသူသည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော linear actuator အရည်အသွေးပြissuesနာများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
ရှေ့သို့ DC က Linear Actuator လျှပ်စစ် FD1
နောက်တစ်ခု: linear Actuator 24v FD4
DC အသေးစား Linear Actuator
မြန်နှုန်းမြင့် Linear Actuator
စက်မှု Linear Actuator
Encoder နှင့်အတူ linear Actuator
Heavy Duty Actuator Linear FD6
အစာရှောင်မြန်နှုန်းလျှပ်စစ်ဆလင်ဒါ Actuator FD9
Feedback အသေးစားလျှပ်စစ် actuator FD5-DW
DC က Motor Linear Actuator FD13 IP66
လျှပ်စစ်အိပ်ရာအဝေးထိန်း, ဆေးရုံကုတင်အဝေးထိန်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာအဝေးထိန်း, Micro Linear Actuator, ဆေးရုံအတွက်ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်း, မြန်နှုန်းမြင့် Linear Actuator,